प्रदेश नेतृत्वमा पूर्वएमालेको वर्चस्व, किन मौन बस्यो पूर्वमाओवादी समूह? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रदेश नेतृत्वमा पूर्वएमालेको वर्चस्व, किन मौन बस्यो पूर्वमाओवादी समूह?
एभरेष्ट टिप्पणी, काठमाडौं, असोज ५ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताको प्रक्रियामा संगठनको अवस्था हेरेर सकेसम्म समानताका आधारमा एकता गर्ने सहमति भएको अवस्थामा प्रदेशको नेतृत्वमा भएको निर्णयले भने पूर्व माओवादी समूहलाई झस्काएको छ ।
सात वटा प्रदेशमा आज सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय हेर्दा पूर्व एमाले समूहले प्रदेश नेतृत्वमा पूर्वएमालेले बाजी मारेको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सचिवालय बैठकले प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष तथा सचिवको टुंगो लगाएको थियो ।
सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएको प्रदेश नेतृत्वमा सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पूर्वएमालेले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको छ ।
पूर्वमाओवादीले भने प्रदेश ६ मा मात्रै प्रदेश ईन्चार्जका रुपमा जनार्दन शर्मालाई पाएको छ ।
पूर्वएमालेले प्रदेश १ मा ईन्चार्जको रुपमा भीम आचार्य, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रदेश ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल र प्रदेश ७ मा भीम रावललाई पाएको छ । यस्तै सहइनर्ज र अध्यक्ष तथा सचिवहरुको नेतृत्वमा पनि सन्तुलन देखिंदैन ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, २ घण्टा सिके राउतकै विषयमा छलफल
यसअघि जिल्लादेखि प्रदेशसम्मको पार्टी एकिकरणका लागि सहजिकरण गर्न गठित कार्यदलहरुले भने करिब ४५ स् ५५ को अनुपातमा दुवैले नेतृत्व गर्न सुझाव दिएको कुरा सार्वजनिक थियो ।
यही अनुरुप कतिपय जिल्लामा बराबरीका आधारमा एकता गर्न सिफारिस भएको थियो भने केहीमा ४५ः५५ को अनुपात देखिन्छ । तर प्रदेशका नेतृत्व हेर्दा भने यसले पूर्व मान्यतालाई भत्काउँदै पूर्व एमालेको एकलौटी कब्जाको भावना दिएको छ ।
संगठनका हिसाबले कमजोर देखिएपनि प्रदेशको समीकरण हेर्दा प्रदेश २, प्रदेश ६ र प्रदेश ७ मा पूर्व माओवादी समूहले इन्जार्च पाउनुपर्ने हो । प्रदेश ७ मा कार्यसम्पादन र जेष्ठताका आधारले समेत पूर्व माओवादी अगाडि छ । तर अन्तिममा आएर प्रदेश ७ मा समेत पूर्व एमालेका नेता भीम रावल इन्जार्ज बनेका छन भने मधेस आन्दोलनपछि संकटमा परेको पूर्व एमालेबाट नै प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल इन्चार्ज बनेका छन् ।
निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सचिवालय बैठकमा प्रदेश नेतृत्वको निर्णय गर्दा माओवादीको दावी नभएको हो या निर्णयमा सहजताका लागि दावी छोडेको हो भन्ने कुरा आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर पनि एकाएक ७ मध्ये १ मात्र नेतृत्व पाउने विषय भने उदेकलाग्दो भएको पूर्व माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस दसैंपछि मात्रै नेकपाको तल्ला कमिटीको एकता
एकातिर पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएकाहरुले समेत जनअपेक्षा अनुरुपको परिणाम दिन नसक्नु र अर्कोतर्फ प्रदेशहरुमा आफ्नो ‘होल्ड’ नहुने अवस्थामा भविष्यमा यसले कस्तो रुप लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । नयाँ पार्टी, नयाँ स्पिरिट र गुटरहित नयाँ संगठनको जति चर्चा र वकालत गरिएपनि समूहगत मनोविज्ञानले समेत धेरै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
प्रदेश नेतृत्वको परिणामसँगै जिल्लामा कसरी एकीकरण हुने हो भन्ने चासो अहिले झनै बढेर गएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा एकता हुने हो भने सम्मानजनक र सन्तुलित समीकरण देखा पर्ने हुन सक्छ । तर पूर्व एमालेभित्र कतिपय जिल्लामा देखिएको गुटगत विवादलाई समायोजन गर्न पूर्व माओवादीलाई नै बार्गेनिङ बिन्दुमा पुर्याइयो भने जिल्लामा समेत समस्या पर्न सक्ने आँकलन नेताहरुले गरेका छन् ।
तर सचिवालयको निर्णयको रक्षा गर्नेहरु भने इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवमा बराबरको संख्यामा दुबै पूर्व पार्टीबाट सहभागी भएकोले यसले समस्या ननिम्त्याउने तर्क समेत गरिरहेका छन् । इन्चार्ज देखि सचिवसम्म एउटा टीम हुने, त्यसपछि कार्यालय रहने भएकोले अहिलेको समीकरणमा जुन समूहको नेतृत्व भएपनि काम गर्ने सवालमा यसले कुनै विवाद या अप्ठ्यारो नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
यस्ताे छ प्रदेश नेतृत्वको नामावली
ईन्चार्ज भीम आचार्य
सहईन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले
अध्यक्ष देवराज शर्मा
सचिव सुरेश राई
ईन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल
सहईन्चार्ज विश्वनाथ शाह
अध्यक्ष प्रभु साह
सचिव सुमन पोखरेल
ईन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य
सहईन्चार्ज हितबहादुर तामाङ
अध्यक्ष नारायण दाहाल
सचिव आनन्द पोखरेल
ईन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
सहईन्चार्ज खगराज अधिकारी
अध्यक्ष हितराज पाण्डे
सचिव गोविन्द नेपाली
ईन्चार्ज शंकर पोखरेल
सहईन्चार्ज दल बहादुर राना
अध्यक्ष ओनसरी घर्ती
सचिव जगप्रसाद शर्मा
ईन्चार्ज जनार्दन शर्मा
सहईन्चार्ज ओमलाल कंडेल
अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी
सचिव माया प्रसाद शर्मा
ईन्चार्ज भीम रावल
सहईन्चार्ज लक्ष्मी जोशी
अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा
सचिव सिंहराज चौधरी
ट्याग्स: meeting, nekapa, Provence Leadership